Uyilo lwe-Motorola RAZR enokusongwa kwividiyo | I-Androidsis
Ukuvuza kwividiyo uyilo lwe-Motorola RAZR enokusongwa
UEder Ferreño | | Motorola, Iiselfowuni
I-Motorola RAZR yenye yeemodeli zodumo lophawu. Kubonakala ngathi ifemu inezicwangciso zokuphehlelela uhlobo lwayo oluhlaziyiweyo kulo nyaka. Inguqulelo apho ifowuni iba yi-smartphone esongwayo, njengoko kubonwe kubulela kwilungelo elilodwa lomenzi. Ke yimodeli evelisa umdla kubasebenzisi.
Ukongeza, kubonakala ngathi ukufika kwale modeli kungasondela kunangaphambili. Kuba amajelo eendaba amaninzi acebisa ukuba i-Motorola izakuveza le nguqulo ihlaziyiweyo yeRAZR kwi-MWC 2019, que iqala kwiiveki ezimbalwa e-Barcelona. Ngoku uyilo lwemodeli luhluziwe kwifom yevidiyo.
Enkosi ngale vidiyo intsha sinako jonga ukuba ingaba luyilo luni lwe-Motorola RAZR Ngokucacileyo ngokupheleleyo. Ukusuka kwinto esinokubona ukuba iya kuba njani le fowuni yokuqala yokusonga yohlobo. Ngaphandle kwamathandabuzo, inomdla, nangona ingumbono, asazi ukuba iyakuba luyilo lokugqibela lwayo.
Ubuncinci kuyasinceda ngendlela yokuba nombono ombi wokuba yeyiphi i-Motorola eya kuphehlelela kwintengiso ngale smartphone. Ungayibona kakuhle indlela inkampani Ndingathatha ithuba lescreen esingaphandle sale RAZR kuvuselelwa xa kusongwa. Ngaphandle kwamathandabuzo, inokunika abasebenzisi amathuba amaninzi.
Inkcazo-ntetho yakhe kwi-MWC 2019 ayisiyiyo into eqinisekisiweyo. Kuwo wonke lo nyaka balindele thina ezahlukeneyo ukusonga ii-smartphones kwintengiso ye-Android, Motorola yenye yazo. Kodwa asazi ukuba iya kuziswa ngokusesikweni e-Barcelona okanye ukuba kuya kufuneka silinde ithutyana.
Ukusukela kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo Inkampani ivelise uluhlu lwayo oluphakathi. Ke ngoko, asazi ukuba lincinci na ixesha eliza kudlula phakathi kokuboniswa kwezi modeli kunye nale Motorola RAZR intsha. Okanye ukuba ekugqibeleni kuya kufuneka silinde ixesha elide. Okwangoku, siyayibona le vidiyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Motorola » Ukuvuza kwividiyo uyilo lwe-Motorola RAZR enokusongwa
I-BlackBerry KEY2 yokuqalisa ngombala omtsha eYurophu
Khuphela iphepha lodonga elitsha le-Samsung Galaxy S10 elandelayo